Azo alaina Firefox 18 | Avy amin'ny Linux
El Amboahaolo (na ny Mena Mena araka izay tianao) manohy ny gadona mahazatra azy ary tonga miaraka amin'ny kinova 18 izay misy ny vaovao mahaliana eo ambanin'ny hood, izay hitantsika ao Ny naoty famoahana.
Azonao atao ny misintona an'ity kinova ity avy amin'ny FTP Mozilla amin'ny fiteny maro sy amin'ny sehatra samihafa.
Sintomy ny Firefox 18
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Azo alaina ao amin'ny Firefox 18
Ao amin'ny osx, tsy misy mampihetsika ahy amin'ny safari, na dia ny google chrome xddd aza
Misaotra betsaka anao amin'ny fanamarihana, Nohavaozina tamin'ny Debian ahy.
Deluxe, indraindray mieritreritra aho satria i Mozilla dia manana ireo famoahana ireo tena mandroso ary tsy manavao izany izy ireo satria mampiditra endrika vaovao!. Amin'izany no hialan'izy ireo amin'ny famoahana kinova vaovao isaky ny mampiditra zava-baovao izy ireo.
Na izany na tsy izany, Misaotra nizara!
Hmmm, tsy haiko ... hatreto dia mandeha tsara ry zareo, «raha mandeha izany dia maninona no manamboatra azy?».
Andao hojerentsika rehefa mivoaka amin'ny fanandramana ao amin'ny Arch.
efa any amin'ny repo fanampiny io
Salama, ahoana no fanavaozana ny Linux Mint 14?
Tsy haiko raha ho azo amin'ny alàlan'ny tahiry. Izany no mahatsara ahy kokoa ny mampiasa tar.gz
Vonona, ao amin'ny OpenSuse, misaotra ny Mozilla BuildService.
Nohavaozina i Debian
Raha misy mahalala amin'ny alàlan'ny repository hametraka azy
Salama Tsy haiko raha nisy nahatsikaritra fa amin'ny tranokala sasany ohatra ny Youtube, google drive, facebook, manjavozavo ny fandikana ireo endritsoratra?
Hitako ity bilaogy ity izay nanondro an'io olana io ihany:
Mandra-pahatongan'ny FF 17.0.1 dia niasa ny zava-drehetra ary tonga lafatra.
(Mampiasa Xubuntu 12.10 amin'ny solosaina finday Lenovo SL400 aho)
Na dia vaovao efa taloha aza dia efa hita ao amin'ny Chakra Bundles!